Indlu esemaphandleni enembonakalo entle kwilali yaseRudzienko - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni enembonakalo entle kwilali yaseRudzienko
Rudzienko, Mazowieckie, Poland
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguBarbara
Indlu esemaphandleni esandul 'ukwenziwa eyi-50 sqm eme kunye nenqolobane kunye nendlu endala efama ekwisakhiwo esiyihektare esiyi-1 ngaphandle kwedolophana yaseRudzienko. Ukubona kakuhle amahlathi, amadlelo kunye namasimi. Ukugaya umlilo phandle; ibasketball, ibhola ekhatywayo, intenetya yetafile kunye negumbi lokuzilolonga kwigumbi elingaphantsi. Indlu ibalungele abantwana. Izinja eziziphathe kakuhle zamkelekile ngamalungiselelo angaphambili. Indawo ekhokelwa ngumnikazi wendlu ohlala efama ngeempela-veki nasehlotyeni.
Indlu esemaphandleni entle imema u ukuba aphumle kwindawo epholileyo. Inegumbi lokuhlala elivulekileyo elinodonga lwefestile olujonge kumadlelo nehlathi. Umnyango omkhulu otyibilikayo uya kwindawo enkulu enetafile nendawo yokujinga yaseHollywood. Isofa etofotofo, isitulo esinendawo yokungqiyama netafile ecaleni kwekhitshi elinento yonke eline-espresso emema ukuba uphumle. Igumbi lokulala elinebhedi elala abantu ababini, indawo yokulala eyongezelelekileyo phezu kwayo kunye newodrophu kunye negumbi lokuhlambela lalamaxesha elineshawa enkulu lingangena kwigumbi lokuhlala. Le ndawo yokuphola esondeleyo ehlathini, imbonakalo entle ukusuka efestileni, iimpungutye zayo, ii-crane, ii-storks, ii-buzzards kunye neentaka eziculayo kunye namakhowa ekwindla yiparadesi yabathandi bemvelo.
Kwiikhilomitha eziyi-18 kukho amachibi amabini - iKarczunek enolwandle, indawo yokupaka izimuncumuncu nemali yokungena, iZalew Wegrowski ayibhatalelwa. Kukho iindawo ezilinganayo ezikumgama weekhilomitha eziyi-4 ezifundisa ukukhwela amahashe kwiholo kunye nokukhwela uhambo kule ndawo. Oda ukutya okumnandi kwinkampani yokupheka okanye ufumane ipitsa kwidolophu yaseDobre.
4.91 · Izimvo eziyi-22
Eyona nto iphambili kule ndawo kukuzola kwayo kunye nendalo eyingqongileyo. Unokuva ii-crane uze ubukele i-deer efestileni yakho. Ungahamba ngeenyawo ixesha elide okanye uphumle everandeni ngaphandle. Akukho bamelwane ngqo okanye indlela exakekileyo ecaleni kwendlu. Une-signal entle yefowuni.
UBarcelona ngumbuki zindwendwe onobubele kakhulu onokukuvuyela ukukunika inkcazelo engakumbi ngale ndawo ngesiPoland, isiNgesi okanye isiJamani. Udla ngokuhamba nenja enobubele.